တတ် နိုင် ရင် ကူ ညီ ကြ ပါ ဦး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တတ် နိုင် ရင် ကူ ညီ ကြ ပါ ဦး
တတ် နိုင် ရင် ကူ ညီ ကြ ပါ ဦး
Posted by bigchef on Jul 7, 2011 in Copy/Paste | 25 comments
ဘာတွေ ဖြစ် ကုန် ကြ ပြီ လဲ . မခံ စား နိုင် ဘူး ဗျာ။ ရွာ ထဲ က တတ် နိုင် တဲ့သူ တွေ လုပ် ကြ ပါ အုံး။
ဒီ က လေး အ တွက် ဘာ လုပ် ပေး ကြ ရင် ကောင်း မ လဲ။အဲ ဒီ လု မ ဆန် တဲ့ မိန်း မ နာမည် နဲ့ကောင် ကို ထောင် ထဲ ထဲ့ ရုံ နဲ. ကျေ နပ် ကြ လား။ ကျွန် တော် သာ ဆို အ ရှင် လတ် လတ် အ ရေ ခွံ ခွာ မယ် ။
ကဲ ရွာ သား တွေ ဘာ လုပ် မှာ လဲ ပြော။
မူ ရင်း သ တင်း က ဒီ မှာ ပါ။ http://burmese.dvb.no/archives/12272
Dvb က ကူး ပြီး ဖော် ပြ လိုက် ပါ တယ်။
Dvb ကို တော့ ခွင့် မတောင်း ရ သေး ဘူး။
တ ဂျီး ဘဲ ခွင့်တောင်း ပေး ပါ။
နှိပ်စက်ခံရသူ ၉ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်အတွက် ရှေ့နေ မရှိ၊ ဆေးဖိုးမရှိ
Published on July 6, 2011 by နော်နိုရင်း • No Comments
ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတမြို့မှာ လျှပ်စစ်မီးပူနဲ့ ထိုးတာအပါအဝင် အပြင်းအထန် နှိပ်စက်ခံရပြီး ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဆေးရုံတက်ရတဲ့ ကိုးနှစ်အရွယ် မိဘမဲ့ ကလေးငယ်လေးဟာ ဆေးဖိုးမတတ်နိုင်လို့ ဟင်္သာတဆေးရုံက ဆင်းခဲ့ရပါတယ်။
ဟင်္သာတမြို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ ကလေးရဲ့ အခက်အခဲကို ဝင်ရောက် မဖြေရှင်းပေးသေးသလို ရှေ့နေမရှိသေးဘူးလို့ နယ်မြေအခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေက ပြောပါတယ်။
ဟင်္သာတမြို့က You & Me လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးလုပ်နေတဲ့ ၉ နှစ်အရွယ် မိဘမဲ့လေး မောင်ထိပ်ကွက်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တုန်းက ဆိုင်ရှင်သမက် ကိုစနိ်ုးက ရိုက်နှက်ပြီး လျှပ်စစ်မီးပူနဲ့ ပေါင်၊ ကျောနဲ့ ဗိုက်တွေကို ထိုးတဲ့အတွက် ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရပြီး ဟင်္သာတ ဆေးရုံမှာ တက်ကုရတာပါ။
ကလေးရဲ့ ဒဏ်ရာ မပျောက်သေးပေမယ့် ဆေးဖိုးမတတ်နိုင်လို့ ဆေးရုံက အခုလ ၃ ရက်နေ့က ဆင်းခဲ့ရပါတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတဦးက ခုလို ပြောပါတယ်။
“ဆွေနီး မျိုးစပ်တော်တဲ့ အဒေါ်အိမ်မှာ လိုက်နေရတယ်။ ပိုဆိုးတာက အနာမကျက်သေးဘဲနဲ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ဆင်းလို့ ရပြီဆိုတော့ သူတို့ကလည်း ဆက်နေဖို့ ရပ်တည်ဖို့ ရှိပုံ မပေါ်ပါဘူး။ ဆေးရုံကလည်း အခမဲ့ ကြည့်မပေးတော့ဘူး၊ ဗမာပြည်ဆေးရုံထုံးစံကတော့။ ရပ်မိရပ်ဖတွေက ငွေကြေးမပြောနဲ့ မုန့်စားဖို့တောင် ဘယ်သူမှ သွားမပေးဘူး။”
ပထမပိုင်း တုန်းက ကျူးလွန်သူဘက်က ဆေးဖိုးဝါးခ လိုက်ပါကူညီပေးပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ထောင်သွင်းချုပ်နှောင်ပြီး အာမခံမရတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မကူညီတော့တာကြောင့် ဆေးဖိုးမတတ်နိုင်ဘဲ ဆေးရုံက ဆင်းခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ မောင်ထိပ်ကွက်က ခွေးကို ရိုက်လို့ဆိုပြီး ဆိုင်ရှင် သမက် ကိုစနိုးက လျှပ်စစ်မီးပူတဲ့ ကျောကုန်း၊ ပေါင်၊ ဗိုက်နဲ့ လက်မှာ ထိုးလို့ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန် ရရှိခဲ့တဲ့အမှုကို ဒီကနေ့ ဟင်္သာတတရားရုံးမှာ စစ်ပါတယ်။
မြို့နယ်တရား သူကြီး ဦးသက်ထွန်းက တရားလိုပြသက်သေတွေကို စစ်ပါတယ်။
ကလေးထွက် ပြေးတာကို လက်ခံတဲ့အိမ်က သက်သေနဲ့ ဆေးရုံလိုက်ပို့သူတွေကို စစ်ပါတယ်။ ဒီကလေးဘက်က လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမယ့် ရှေ့နေ တဦးမှ မပေါ်လာသေးပါဘူ။
ဒီကနေ့ တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုတဲ့ ကလေးဘက်က သက်သေ မအေးအေးစိုးကို မေးမြန်းရာမှာ အဲဒီနေ့တုန်းက သူအလုပ်ကအပြန် ထမင်းဆိုင်မှာစားနေတုန်း အမှောင်ထဲမှာ တုန်ရီနေတဲ့ ဒဏ်ရာအများကြီးနဲ့ ကလေးကို သနားလို့ အိမ်ကိုခေါ်ပြီး မေးမြန်းရာမှ သိသမျှကို ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အဲဒီတော့ စနိုးက သူကို့ မီးပူနဲ့ ထိုးတယ်တဲ့။ ပေါင်ကို အရင်ထိုးတာတဲ့၊ ပေါင်မှာလည်း မီးပူရာ တွေ့ရတယ်။ နောက်ပြီး ကျောကုန်းကိုလည်း ထိုးထားတဲ့ အရာတွေ တွေ့ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လက်မှာလည်း အစက်ကလေးတွေ တွေ့လို့မေးတော့ ပလတ်စတစ်ကို မီးရှို့ပြီးတော့ သူ့လက်ကို အစက်နဲ့ ချတာတဲ့။ သားကတဲ့… သူ့ကို ရေစာလို့ တောင်းလည်းတောင်းရော မင်းကို ရေတော့ မတိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ သေးပဲတိုက်မယ် ဆိုပြီးတော့ သေးပေါက်ပြီးတော့ သူ့ပါစပ်ထဲ ထည့်တယ်တဲ့။ အဲဒါ ရေစာတော့ မျိုချလိုက်ရတယ်တဲ့။ ညနေစောင်းလောက် ဗိုက်စာလို့ ထမင်းတောင်းတော့ ခွေးချေးခြောက်တွေ ယူပြီးတော့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီးတော့ အဝတ်စနဲ့ ဆို့ထားတယ်တဲ့။ သူ့မိန်းမလည်း ပါတယ်တဲ့။ သူ့မိန်းမက သူ့ကို ကြိုးနဲ့ တုပ်ပြီးတော့ ရိုက်တယ်တဲ့။”
ဒီကနေ့ထိ တရားခွင်မှာ ကလေးဘက်က ရှေ့နေလိုက်ပေးမယ့်သူ မရှိဖြစ်နေပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးစီးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ရှေ့နေကွန်ရက်ထံက အကူအညီရရှိရေးကို ဒေသခံတွေက ကြိုးပမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
လူမမယ်ကလေး ငယ်ကို အပြင်းအထန်နှိပ်စက်ကလူပြုပေမယ့် ရဲက သာမန်နာကျင်စေမှုနဲ့သာ ဖွင့်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒေသခံတွေမကျေနပ်သံတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ ပြောင်းလဲပြီး အာမခံမပေးတော့ဘဲ ထောင်ချုပ်မှာ ချုပ်ထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေအရ ကျူးလွန်သူဘက်က ဒီအမှုကျေအေးအောင် ကျပ်ငွေ ငါးသိန်းနဲ့ အမှုပိတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေသလို ခိုကိုးရာမဲ့ မိဘမဲ့ကလေးငယ်ဘက်က ကျေအေးရမယ့် အခြေအနေ ဆိုက်နေတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူက ပြောပါတယ်။
အဲလိုကြီးတော့ ကောင်းပါဘူးဗျာ.. ကောင်လေးသနားစရာပဲပေါ့
ကျွန်မ အဲ့ဒီသတင်း မေးလ်ထဲက ရဖူးတယ် ။ ပုံလဲပါတယ် … တကယ့်ကို ရက်စက်တဲ့ မိသားစုပဲ ….. ။ အရေခွံတွေများ အလိတ်လိုက်ပဲ့နေတာ … အမိမဲ့သား ရေနည်းငါးမို့ ၀ိုင်းရက်စက်တယ် ထင်ပါရဲ့ ။
လူသားအချင်းချင်း ဒီလောက်တောင် နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ချင်တာ တရားဥပဒေအရ ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုခု ပေးဆပ်သင့်ပါတယ် … ။ ရှေ့နေတွေကလည်း …. ဖရီးလိုက်ရမှာဆိုးလို့ ထင်ပါ့… လိုက်မဲ့လူမရှိသေးဘူးပဲ … ။ အလှူငွေကောက်ပြီး ရှေ့နေ ငှားလျှင် ပို ကောင်းမယ် ထင်ပါရဲ့ … ။
ရက်စက်လိုက်ကြတာ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းမစာဘူးနော်.. သူတို.သားသမီးတွေကျဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး…
တော်တော်၇က်စက်ကြတာပဲ အသက် (9) နှစ်အရွယ် ဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့
ကလေးကို ဘာအငြိုးနဲ့များ ဒိလောက်ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ရက်ရတာပါလိမ့်
သားသမီးချင်းမစာမနှာ မေတ္တာကရုဏာတွေ အပြည့်၇ှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့
လုပ်ရက်က ဒီလိုမျိုးတဲ့လား …………..
ဟိုတလောကလဲ ကျောင်းကပြန်လာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုဖမ်းပြီး လျှာဖြတ်၊ရုပ်ကိုမမှတ်မိအောင်လုပ်ပြီး
ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းခိုင်းဘူးတာကြားလိုက်ရတယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောပြတာပါ နောက်မှကလေးကသူ့အမေကိုတွေ့ပြီးတကောက်ကောက်လိုက်ရာကနေ သူ့အမေကပြန်မှတ်မိသွားတယ်တဲ့
နှိပ်စက်တဲ့သူတွေက normal ကောဟုတ်ကြရဲ့လား
အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ စုံစုံရယ် နော်မယ်မဟုတ်ဘူး ရူးနေတာဆိုလည်း ကိုယ့်အသား ကိုယ်လှီးချင်အောင် ရူးကြပါလား….. အခုတော့ … ဟွန့် … အရူးပါးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ပုံလေး ရှိရင် တင်ပါအုန်း မမြင်ဖူးသေးဘူး။
ဆူးမမ ရေ eleven က တင်ပေးထာတယ်
ကလေးပုံလေး မြင်သွားပြီ။ ကလေးက သနားစရာလေး.. နာဂစ် ကလေးငယ်တွေ များလား မသိဘူး။ ဟင်္သာတ ဆိုတော့ အဲလိုတော့ ထည့်မရေးထားဘူးနော်။
Facebook မှာ သူငယ်ချင်းတယောက်တင်ထားလို့ အဲ့ဒီ့ကလေးပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ။
တော်တော်လေးကိုဆိုးတယ် ၊ နှိပ်စက်ထားတာတွေက အသားနီတွေတောင်မြင်နေရတာ အကွက်လိုက်တွေ အများကြီးရယ်။ ဟင်္သာတမြို့ ဘုရားနားက U&Me လဘက်ရည်ဆိုင်က ခိုင်းတဲ့ကလေးပါ။ အဲဒီ့ဆိုင်ရှင်တွေ မွေးထားတဲ့ ခွေးကို ကလေးက ရိုက်မိလို့ဆိုပြီး ကလေးကို နှိပ်စက်ထားကြတာ ။ ဆိုင်မှာ အောက်ခြေသိမ်းအကုန်လုပ်ပေးရတယ် ၊ ထားတော့လည်း ခွေးတွေထားတဲ့ နေရာမှာ ထားတာ ။ အဲဒီ့ခွေးကို ရိုက်မိလို့ဆိုပြီး နှိပ်စက်ထားတာ လူမဆန်ဘူး ။ မီးပူနဲ့လည်းကပ်ထားတယ်။ ခွေးချေးတွေ ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး အ၀တ်နဲ့ပါးစပ်ကို စည်းထားခဲ့တယ်လို့လည်းေ၇းထားတယ် ။
အရမ်းကို လူသားချင်း ကိုယ်ချင်းမစာနာတတ်တဲ့ သူတွေပါပဲ။
ဟယ် … ယုတ်မာလိုက်တာ … အဆင့်မရှိဘူး … အဆင့်မရှိတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အထက်ကို တတ်လှမ်းနိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး … ဒီလိုမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်နော် … သူများကို အဲ့လိုနှိပ်စက်ဖို့မပြောနဲ့ စိတ်ပုပ်ရမှာတောင်ကြောက်တယ် …
ဆိုးလိုက်တဲ့လူတွေ အဲလိုလူမျိုးတွေကို အမှုမပိတ်ဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ လူအချင်းချင်းနှိပ်စက်တဲ့အပြင် ဘာမှမသိသေးတဲ့ ကိုးနှစ်အရွယ်ကလေးကို ဒီလိုလုပ်တာတော့ လွန်လွန်းပါတယ်..
ကြည့်ရတာ သူတို့ လဲ အကပ်ကောင်း အခံကောင်းတွေ ရှိလို့ နေမယ် ထင်တယ် ။ ဆေးရုံက ဆက်လက် မကုပေးရဲ ဘူးဆိုတော့ က
အဲဒါပေမယ့် ကိုယ်မခံရသေးရင်တော့ဒီလို မျိုးလုပ်ရက်တာပေါ့။
အကယ်၍ ဒါဏ်ရာတွေ ကုသပျောက်ကင်းသွားလျှင်တော့ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ ကျောင်းတွေကို ပို့ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ ရေရှည်အတွက်ပေါ့။
ကလေးရဲ့အရွယ်(9)နှစ် ။ ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ရတာရင်ထဲမှာမကောင်းဘူး ။တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ စီရင်ချက်ချသူများ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ တော့ ချလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်မိတာပဲ။ ကလေးက အရမ်းငယ်သေးတယ်။ ဘ၀ရဲ့ အတိတ်ကံ ဆိုးဝါးတယ်။ ဒီအရွယ်နဲ့ မိမဲ့ဖမဲ့ နေရတယ်။လူမဆန်တဲ့ နှိပ်စက်ခြင်းတွေကြုံရတယ်။ ဒီကလေးရဲ့ အနာဂါတ်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ဒီကလေးရဲ့ရင်ထဲမှာ ဘာဒဏ်ရာတွေရှိသွားမလဲ။ MaMa ပြောသလို မိဘမဲ့ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့ ကျောင်းကို ပို့ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ဒီကလေးအတွက် လျော်ကြေးရခဲ့ရင်ကော ဘယ်သူတွေကဦးဆောင်ပြီး ဘာတွေလုပ်ကြဦးမှာလဲ…… ဆိုတာတွေကို တွေးပြီးရင်မောမိတာအမှန်ပါပဲ…………….
ပြုသူအသစ်..ဖြစ်သူအဟောင်း ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဖြေပေမယ့်လည်း ရင်ထဲမှာနင့်နေအောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
ဒို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာတောင် ဒီလိုအောက်တန်းကျ ယုတ်မာရက်စက်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေရှိနေပြီးလားနော်…
မြန်မာပြည်မှာ အလကားလိုက်တဲ့ရှေ့နေဆိုတာ မရှိတော့ဘူး၊ရှိတဲ့သူလဲ ထောင်ထဲရောက်ရင်ရောက် မရောက်ရင်လိုင်စင်သိမ်းခံရပီမှတ်။လူအခွင့်အရေးလူပ်ရှားနေတဲ့ အဖွဲအစည်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးသင့်တယ်။ငါတို့တိုင်းပြည်ဟာ မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လား၊ဥပဒေဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ…
မတော်နေ တစ်နေ့ ရွာသားတွေနဲ့ပြန်ဆုံရင် အရိုက်ခံရနိုင်တယ်
( မကျေနပ်မှု့အပေါင်း သရဖူးဆောင်း ရှိရှိသမျှ မကျေနပ်မှု့များကိုရေးထားသည်ဟူ၍ သဘောထားကြပါ )
အဲဒီကလေး နောက်နောင် ကောင်းရာမွန်ရာ မေတ္တာဓာတ်အပြည်.ရှိတဲ. အလုပ်ရှင်နဲ.တွေ.ပါစေ
အခုလည်း ငွေကြေးမကြည်.ပဲ ကူညီမဲ.သူ များများတွေ.ပါစေ
သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ။ ရက်စက်လိုက်တာ။
ဆေးရုံကရော. ပြည်သူ့ ဆေးရုံမဟုတ်ဘူးလား။ အလကား ကုပေးလိုက်ရင် ဘာဖြစ်မှာ မို့လို့ လဲ။
ဒီလို သာဆို ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေ က အသေခံ ပေါ့..
ခေါင်းစဉ်ကတော့ ကူညီကြပါအုံး ဘယ်သူမှ ဘယ်လိုဆက်သွယ်အကူအညီပေးရင်ကောင်းမလဲ မဆွေးနွေးကြဘူးနော် ဟင်္သာတ သို့မဟုတ် နီးတဲ့နေရာမှာနေတဲ့လူမရှိကြဘူးလား
ပုံတွေကြည့်ရတာ တကိုယ်လုံး ဒဏ်ရာဗရပွနဲ့
ကလေးကလည်း ဆိုင်ကပစ္စည်းတွေ ငွေတွေ ခိုးတယ်ဆိုပဲ